, Kwasuka Hacks Phila Izinkundla - Uphondo Of The Day
Cabanga ukubuthana enamandla kakhulu yolwazi uzokwazi ukuthola ku ekamelweni elilodwa.
Yilokho uthola uma uya , kwasuka Hacks emhlanganweni Live.
On the Timespan ka 3 izinsuku, 17 babantu liyabonakala kakhulu ebhizinisini uphondo nihlangene 3,000 indoda futhi abesifazana abafisa ufunde izimfihlo zawo ukuhweba.
Lo mcimbi e 2018 kwaba Imininingwane yerekhodi full ukuthi sathengisa Ababekhona indaba ngemizuzwana.
Out of the 52,000 asebenzayo abasebenzisi uphondo emhlabeni wonke, nje kuyingxenye encane efika ngomusa ochwepheshe kweqiniso.
Uma ungafuni ukukhishwa inyumbazana, aqaphe yomcimbi ngonyaka ozayo.
Sekuvele ukuthi imemezele!